Ra’iisul Wasaare Khayre :Ciidanka AMISOM waxey u joogaan si ay shacabka Soomaaliyeed u difaacaan – Balcad.com Teyteyleey
Ra’iisul Wasaare Khayre :Ciidanka AMISOM waxey u joogaan si ay shacabka Soomaaliyeed u difaacaan
By Abdihakin Yousuf	 On Aug 1, 2017
Ra’iisul Wasaaraha dalka Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiyeeyey askartii ku geeriyootay dagaalkii ka dhacay deegaanka Golweyn. Ciidankaas oo isugu jira kuwa AMISOM iyo ciidanka XDS oo difaacaya shacabka Soomaaliyeed.
wuxuu sheegay in ciidamadda Amisom ay Soomaaliya u joogaan in shacabka Soomalaiyeed ka difaacaan kooxaha argagaxisada ah
“Ciidanka AMISOM waxey ka yimaadeen dalalkooda si ay shacabka Soomaaliyeed uga difaacaan kooxaha argagaxisada ah oo caadeystay inay shacabka laayaan, isla markaasna doonaya in ay hor istaagaan horumarka ay dawladda iyo shacabku ku tallaabsadeen. Ciidanka AMISOM waxey diyaar u yihiin inay dhiiggooda u huraan wallaalahooda Soomaaliyeed, waana uga mahadcelineynaa sida geesinimada leh oo ay ugu soo gurmadeen dalkan.” ayuu yiri Xasan
Malayshiyada ururka al-Shabaab ayaa wadada u galay kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM. Weerarka oo ka dhacay meel ku dhaw tuulada Golweyn waxaa lagu dhintay 12 askari , ciidamada AMISOM ayaa ku sii jeedey magaalada Buula Mareer ee gobolka Shabeelada Hoose.
The post Ra’iisul Wasaare Khayre :Ciidanka AMISOM waxey u joogaan si ay shacabka Soomaaliyeed u difaacaan appeared first on Ilwareed Online.
Dowlada Federaalka Soomaaliya oo sakay wafdi kasocda ay tagayaan dalka Liibiya
Maamulka Jubaland oo udiyaar garoobay duulaanka daagaal ee alshabab